Vaovao - Fampivoarana ny bozaka artifisialy eo amin'ny fiainan'ny olona
Raha ampitahaina amin'ny bozaka voajanahary, ny bozaka artifisialy dia vita amin'ny alàlan'ny fizotran'ny asa tanana toy ny fanomanana ara-materialy, ny fanaovana sary, ny fanodikodinana, ny fikororohana, ny fametahana, ny fanamainana ary ny familiana, izay zarazaraina ho ahitra ara-panatanjahantena, bozaka fialamboly ary bozaka multifunctional. Talohan'izay, ny vokatra bozaka artifisialy dia henjana ary tsy mandaitra ka vitsy ny olona vonona hampiasa azy io amin'ny faritra ivelany. Na izany aza, ny fandrosoana ara-teknolojia dia nitondra fanovana lehibe. Ny ahitra artifisialy dia toa ahitra tena izy, izay ankasitrahan'ny olona maro kokoa. Raha ampitahaina amin'ny bozaka voajanahary, ny ahitra artifisialy dia manana tombony sy tombony maro.
1. Ny bozaka artifisialy dia azo apetraka amin'ny sehatra fototra isan-karazany, miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny fototra ambany, tsy misy tahotra ny vaky, tsy misy tahotra ny mikorontana sy ny delamination, ary tsotra sy ara-toekarena.
2. Ny ahitra artifisialy dia manana fikojakojana tsotra sy vidin'ny fikolokoloana ambany. Afaka sasana amin'ny rano madio izy mba hanesorana ny loto, ary manana ny toetra tsy misy mihalefy ary tsy misy fihoarana.
3. Sahala amin'ny ahitra tena izy ary manana ny fahatsapana maitso; Vita ny karazany, ary ny halavan'ny ahitra dia azo safidiana arakaraka ny tena fampiasana azy.
4. Ny tany fanatanjahan-tena ahitra artifisialy dia manana endrika tsara tarehy amin'ny ankapobeny, tahan'ny fampiasana avo lenta, androm-piainana maharitra mihoatra ny 10 taona, faharetana ary fikojakojana mora foana, ary azo ampiasaina tsy tapaka amin'ny famantaranandro.
5. Ny fitaovana ahitra artifisialy dia sariaka amin'ny tontolo iainana, ary ny vokatra vita dia namboarina. Ny vanim-potoana fananganana dia raikitra ary fohy, mora ny mahay ny kalitao, ary ny fanekena dia tsotra nefa tsy misy fahalalana matihanina betsaka.
Ny tanety artifisialy dia manana ny mampiavaka ny tahan'ny fampiasana avo, ny fitrohana ny hatairana, ny tabataba, ny fiarovana, ny tsy misy poizina, ny elastika, ny faharetan'ny lelafo tsara, sns. Mety be amin'ny fampiasana any an-tsekoly ary io no hetsika, fampiofanana ary toerana ifaninanana ankehitriny.
Ny fanamarihana dia voaangona mivantana, noho izany tsy mila miahiahy momba ny fanamarihana matetika, ary mora ny fikojakojana, ary saika tsy misy vidiny fikojakojana manaraka.